Akụkọ - Uzo ole ka kilomita gbanwere diski breeki oge ọ bụla?
Ọ bụ kwuru na breeki pad na-ofu ugboro ole ịgbanwe ya. Ọ dabere na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala na omume ịnya ụgbọ ala. Omume ndị a ga-emetụta iji ihe mgbochi breeki. Ọ bụrụ n’ị maara nke ọma, ị ga-achọpụta na n’ọtụtụ oge, ekwesighi ịzọ ụkwụ na brek niile. Ọ bụrụ na ejiri fim ahụ nke ọma, ọ nwere ike iru 100,000 kilomita.
Mgbe ahụ, n'ọnọdụ ndị dị a toaa iji dochie ihe mgbochi breeki, ị nwere ike ịgafe nyocha ndị a na-esote, ma dochie ha ozugbo ma ha mezuo ọnọdụ ndị ahụ.
1. Lelee ọkpụrụkpụ nke ihe mgbochi breeki
Lelee ma breeki pad ahụ dị gịrịgịrị. Nwere ike iji obere tọọchị hụ iji hu ma nyocha. Mgbe nnyocha ahụ chọpụtara na ngwongwo esemokwu ojii nke mpempe akwụkwọ breeki na-aga ịla n'iyi, na ọkpụrụkpụ erughị 5 mm, ị kwesịrị ịtụle iji dochie ya.
2. ofda braking
Ọ bụrụ na ịnụrụ ụda igwe na-ada ụda na brek mgbe ị na-akwọ ụgbọala kwa ụbọchị, ị ga-ege ntị n'oge a. Nke a bụ igwe mkpu na breeki breeki amalitela iyi diski breeki, yabụ ụda igwe a dị nkọ.
3. Braking ike
Mgbe ị na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ ma na-agba ọsọ na breeki, ọ bụrụ na ike gwụ gị ike, enwere mmetụta dị nro mgbe niile. Ọ na-adịkarị mkpa pịa breeki ahụ ka ọ dị omimi iji mezuo mmetụta nkwụsị nke gara aga. Mgbe ejiri breeki mberede, ọnọdụ pedal ga-doro anya na ọ ga-adị ala. O nwere ike ịbụ na breeki breeki ejirila nkụda mmụọ kpamkpam wee dochie ya n'oge a, ma ọ bụghị ya, ihe ọghọm ga-eme.
Kedu kilomita ole ịgbanwe diski breeki?
N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-agbanwe diski breeki ọ bụla kilomita 60,000-70,000, mana nkọwa ndị ahụ dabere na omume ojiji na gburugburu onye nwe ya. N'ihi na onye ọ bụla nwere àgwà ịkwọ ụgbọala dị iche iche, diski breeki na mpempe akwụkwọ breeki dị iche. N'ezie, diski breeki na breeki breeki bụ ọrụ dị mkpa a ga-enyocha tupu ịkwọ ụgbọala. Fọdụ ụlọ ahịa 4S nwere ezigbo ọrụ ma nwee ike ichetara gị na ọ dị mkpa ka edochie diski breeki.
Mgbe a gbanwere mpempe akwụkwọ breeki ọtụtụ oge, iyi nke diski breeki ga-abawanye. N'oge a, a ga-anọchi diski breeki breeki. A ga-edochi diski breeki mgbe a gbanwere ihe mgbochi abụọ ma ọ bụ atọ n'otu ngbanwe. Ya mere, mgbe ị na-edochi ihe mkpuchi breeki ahụ, ekwesịrị ịdebe diski breeki na oge, ma dochie ya mgbe ha na-eyi akwa.
Na mgbakwunye na ejiji nkịtị nke diski breeki, enwekwara uwe nke àgwà breeki breeki ma ọ bụ diski breeki mepụtara na nhazi nke okwu mba ọzọ n'oge ọrụ nkịtị. Ọ bụrụ na ndị mba ọzọ na-eyi breeki breeki ahụ, uzo miri emi ma ọ bụ diski ihu na-eyi njehie (oge ụfọdụ dị mkpa ma ọ bụ sie ike)
Isi ihe maka nlezianya na ndozi diski breeki: Ebe ọ bụ na diski breeki ga-ewepụta ọtụtụ ọkụ n'oge braking, adịghị asa ụgbọ ala ozugbo ụgbọ ala agbachara. Kwesịrị ịgbanyụ breeki iji belata ogo elu nke diski breeki iji gbochie diski breeki dị elu site na ịzịza n'ihi ịkpọtụrụ mmiri oyi. Oyi shrinkage na-eweputa nrụrụ na mgbape. Tụkwasị na nke ahụ, ụzọ kachasị mma iji mee ka ndụ diski breeki dịkwuo mma bụ ịnọgide na-enwe ezigbo ọkwọ ụgbọala ma gbalịa izere nkwụsị mberede.